Haweeneey 90 sano jir ah oo ka soo jeeda Hong Kong oo laga dhacay lacag gaaraysa HK250 milyan oo lacagta Hong kong ah una dhiganta $32m oo dollar | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Haweeneey 90 sano jir ah oo ka soo jeeda Hong Kong oo...
Haweeneey 90 sano jir ah oo ka soo jeeda Hong Kong oo laga dhacay lacag gaaraysa HK250 milyan oo lacagta Hong kong ah una dhiganta $32m oo dollar
Haweeneey 90 sano jir ah oo ka soo jeeda Hong Kong ayaa laga dhacay lacag gaaraysa HK250 milyan oo lacagta Hong kong ah una dhiganta $32m oo dollar. Arrintan waxaa soo maleegay rag burcad ah oo iska dhigay in ay yihiin saraakiil Shiineys ah, waxaa sidaasi sheegay booliska.
Booliska Hong Kong ayaa sheegay in dambiilayaashu ay sheegeen inay ka tirsan yihiin saraakiisha amniga dadweynaha, ayna baaritaan ku sameynayaan kiis dambi ah oo ka dhacay Shiinaha.
Haweeneyda ayaa loo sheegay in kaarkeeda aqoonsiga la xaday isla markaana falal dembi ah looga geystay Shiinaha gudihiisa.
Ka dibna waxaa lagu qasbay in 11 jeer ay lacag ku shubto akoon bangi intii u dhexeysay bishii sideedaad ee 2020 ilaa bisha koowaad 2021, waxaana lagu wargeliyay in lacagaahaas la baarayo.
Ilaa iyo hadda booliska waxay xireen nin da’diisu tahay 19 sano jir balse maalmo kaddib isna dammaanad ayaa lagu sii daayay.
Warbaahinta maxaliga ah ayaa ku waramaysa in haweeneydan markii ugu horeysay lala soo xiriiray bishi August ee sannadkii hore, waxayna ku wargileyeen in ay yihiin saraakiil ka tirsan booliska Shiinaha.
Markaas ka dib ayaa raggan tuugada ah waxay haweeneydas u geyeen talefoon kaas oo ay kala soo xiriri jireen.
Dhacdadan waxaa la ogaaday markii jaariyadda guriga joogtay ay dhacdada ku wargelisay gabadha ay dhashay haweeneydaas da’da ah, waxayna u sheegtay in ay ka shakisay in howlo aan caadi ahayn ay guriga ka socdaan.
Previous articleSuudaan waxay dhexda u gashay khilaaf muddo toban sano ah u dhaxeeyay Itoobiya iyo Masar
Next articleGolaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika oo xaraan ku tilmaamay muddo kordhintii loo Sameeyay madaxweynaha iyo baarlamanka Somali
Feeryahanadda Soomaaliyeed ee Ramla Cali ayaa Soomaaliya sanadkan ku matali doonta ciyaaraha feerka ee Olombikada Adduunka ee lagu qabanayo magaalada Tokyo ee dalka Japan,...
Afhayenka Ciidanka Tigray’ gabre Sadik oo war baahinta la hadlay
Qaar kamid ah mas’uuliyiinta Hirshabeele oo si kulul ugga jawaabay war...
China oo wacad ku martay in ay ka aargudan doonto tallaabo...
Wafdiga ka socota Qaramada Midoobay ee arrimaha gargaarka bani aadanimada oo...
Wasiir Duraan oo qaab qabiil u adeegsaday cuna qabateen Shacabka Soomaliyeed
Safaarada Swedan ee Mogadishu oo ku dhawaaqday inay Somalia ugu deeqday...